မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ Anonymous Hacker အဖွဲ့ ပါဝင်လာတော့မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ မြင်နေရ – Myanmar Update News
မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ Anonymous Hacker အဖွဲ့ ပါဝင်လာတော့မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ မြင်နေရ
News-Update | February 10, 2021 | Local News | No Comments
တွိတာများလို့ မြန်မာနိုင်ငံရေးကို သတိထားမိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး Anonymous Hacker အဖွဲ့
များများတွိကြပါ… မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသံကို ကြားသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံ Anonymous Hacker group …
မနေ့က anonymous hacker group ရဲ့ twitter မှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသံတွေ မင်းမဲ့စရိုက်တွေ အကုန်သူတို့ group က ပြန် tweet ထားတာတွေ့တော့ မြန်မာပြည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်အကြီးကြီးသန်းလာပြီမို့ အရမ်းပျော်ပြီး လာရှယ်ရပါတယ်နော်။
Anonymous Hacker Group ဆိုတာဘာလဲ?
သူတို့က တစ်မ္ဘာလုံးဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အတျောဆုံး ကွန်ပြူတာ hacker များဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဘယ်သူဆိုတာ ခုထိ ခြေရာခံလို့မရပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ အလုံခြုံဆုံးဆိုတဲ့ ဘဏ်စနစ်တွေ မသမာသူသူဌေးများမှသူတို့ ကာကွယ်ရေးအတွက်ငှားထားတဲ့ cyber security ကုမ္ပဏီတွေ မတရားအာဏာသိမ်းအစိုးရတွေ website တွေ hack ကို ဖြုတ်ချပြီး
ပြည်သူတွေရဲ့ မတရားခံရမှုတွေကို လက်စားချေဖို့၊ မသမာလုပ်နေတဲ့ ကြောင်သူတော်သူဌေးများကို အမည် နေရပ် ဘက်ဂရောင်းတစ်ခုလုံး ဖော်ဖို့၊ သတင်းအမှားများဖော်ပြနေတဲ့ အစိုးရ website တွေ ကို ဝင်စီးပြီး သူတို့ရဲ့ မျက်နှာဖုံးကွာကျပြီး လူကြားထဲစောက်ရှက်ကွဲအောင်လုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ ကွန်ပြူတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အစည်းအရုံးလို့ပဲခေါ်ကြပါစို့။
ခုခေတ် လူငယ်တော်တော်များများကတော့သူတို့ အဖွဲ့နာမည်ကိုကြားဖူးကြပါတယ်။ မကြားဖူးတဲ့သူများအားတက်သွားအောင် သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ အောက်မှာဆက်ဖတ်ပါ။
Anonymous Hacker Group ဘယ်လိုစခဲ့လဲ?
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ 4chan လို့ခေါ်တဲ့ အင်တာနက်ချက်တင်အဖွဲ့ကနေ တကမ္ဘာလုံးဆိုငျရာ ကွန်ပြူတာစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းတတ်တဲ့ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာတွေက မတရားခံရတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူကိုယ်စားပြုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ US, UK, North Korea လို security တင်းကျပ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေတောင်သူတို့ကိုကြောက်ရပါတယ်။ သူတို့ကို V for Vandetta ရုပ်ရှင်ထဲက Guy Fawkes mask တွေ ဝတ်ပြီး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခုချိန်ထိ Anonymous ဦးဆောင် စီစဉ်ခဲ့တဲ့နာမည် အကြီးဆုံး cyber attack များ အီဂျစ် က အာဏာရှင်အစိုးရတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့။ အီဂျစ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က ခုချိန် မြန်မာပြည်လို သတင်းအမှောင်ချတဲ့ခေတ်မှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာကို fax ကနေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပြည်ပက သတင်းအမှန်တွေပေးပို့ပြီး တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။
တူနီးရှား အာဏာရှင်အစိုးရ လက်ထက်မှာ တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ Care package တွေ လိုအပ်တဲ့နေရာကို အလျှင်အမြန်ဖြန့်ပေးပြီးကူညီခဲ့ပါတယ်။ ( ဥပမာ အင်တာနက်ပိတ်ထားရင် ကျော်လို့ရတဲ့ proxy website တွေ လူထုကိုပေးပါမယ်။ လှူပေးမယ့်အလှူရှင်နဲ့ လိုအပ်မှုရှိတဲ့ပြည်သူကိုချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။)
အစိုးရ ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ သတင်းမှားလွှင့်တဲ့ website ရှစ်ခုကိုဖြုတ်ချပြီး လူထုတင်မြှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်ကို လူထုကြားထဲဖြန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Wikileaks website ( တရားဥပဒေအထက်မှာ နေချင်တဲ့ မသမာသူ နိုင်ငံ့အစိုးရ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လူသိမခံနိုင်တဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါက်ကြားလို့ရတဲ့ website ) ကို
သူဌေးတွေရဲ့ အပုပ်ဖော်တာမခံနိုင်တော့လို့ အလုပ်တွဲမလုပ်တော့ဘူးဆိုငြင်းတဲ့ Visa, MasterCard, PayPal service တွေကို hack လုပ်ပြီး server တွေ down စေခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘက်မှာပဲရပ်တည်တဲ့ လေလှိုင်းပေါ်က အမှန်တရားဘက်တော်သားတွေပါ။ သူတို့ဒဏ်ခံရတဲ့ထဲမှာ မြောက်ကိုရီးယား၊ US ရဲ့ တရားဥပဒေရုံး၊ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေ ရဲ့
အင်တာနက်လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးရတဲ့ cyber security company တွေလဲပါပါတယ်။ သူတို့ယုံကြည်တာ ကမ္ဘာသားအားလုံး တရားမျှတမှုရရမယ်။ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးရရမယ်။ သတင်းလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် ( Freedom of information/ freedom of speech) ရှိရမယ်။ ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေအကုန် ဒီ anonymous ကလုံးဝမကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာပါ။
Anonymous ဝင်ပါလာပြီဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ cyber attack များ
၁။ သူတို့ အစိုးရဘဏ်တွေရဲ့website ကို ဝင်စီးပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကောင့်ကိုဝင် သူတို့ရဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ အတိအကျကြည့်လို့ရ ( zero ဖြစ်သွားအောင် ယူလို့လဲ ရချင်ရမယ် မပြောတတ်) စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အမည် ဘဏ်အကောင့်နေရပ်လိပ်စာ
ဆှမြေိုးစာရငျးပါတဈကမ္ဘာလုံးသိအောငျလုပျပွပွီး တဈကမ္ဘာလုံးနဲ့ ပြည်သူများရှေ့စောက်ရှက်ခွဲနိုင်။ သူတို့က ဒေတာယူပြီး စစ်ခုံရုံးလိုနေရာအပ်လိုက်မှာ။ ကျန်တာ နောက်ဆက်တွဲ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပဲ။
၂။ ဆန္ဒပြ ပြည်သူများထဲက သူတို့လို့နိုင်ငံတွင်းက hacker တွေကို ကူညီပြီး သတင်းမှားတွေဖြန့်နေတဲ့ website page တွေ ကို hack ပြီး မအလကို ကို သူခိုးပုံ ပြောင်းထားတဲ့ ပုံတွေ တင်နိုင်။ ( မြောက်ကိုရီးယားမှာကင်ဂျောင်အွန်းကို ဝက်ပုံပြောင်းပြီး မြောက်ကိုရီးယားofficial အစိုးရwebsite မှာ တင်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်)
၃။ အာဏာရှင်တို့ အကျင့်ယုတ်ပြီးအင်တာနက်ဖြတ်လိုက်လဲ anonymous က သူတို့ ဘလော့ခ်လုပ်ထားတဲ့ network တွေထဲဝင်ပြီး သူတို့လုပ်ထားပိတ်ထားတာတွေ အကုန်ပြန်ဖြည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ( မျှော်လင့်တာထဲက တစ်ခုပေါ့လေ)
၄။ သူတို့ဝင်ပါလာရင် နိုင်ငံတိုင်းက အစိုးရတွေ အရမ်းကြောက်ကြပါတယ်။ဘယ်လို နည်းပညာနဲ့တားတားသူတို့ကို ပိတ်လို့တားလို့မရလို့ပါ။ သူတို့ဝင်ကူတဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတိုင်းကလဲအောင်မြင်တာများပါတယ်။
ခုသူတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေတင်တဲ့ tweet တွေကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။တစ်ချို့ဟာတွေ retweet ပြန်လုပ်နေပါတယ်။ ( Twitter သမားများ သတင်းအထူးပါရင် သူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပေးစေချင်ပါတယ်)
သူတို့ကိုခုချိန်ထိ တိုးတက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်အစိုးရ hacker မှ တားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ သူတို့နိုင်ငံခြားက ဘဏ်အကောင့်တွေထဲက ပိုက်ဆံတွေ exposed လုပ်ခံရတော့မလဲကြောက်ရပါတော့မယ်။
ကိုယ်တွေ ပြည်သူဘာမှ မလုပ်နိုင်ရင်သူတို့က လုပ်နိုင်တဲ့ power ရှိတဲ့သူတွေကို အပ်လိုက်မှာပါ။မဟုတ်တာလုပ်ထားတာမှန်သမျှ မရှုမလှပေါ်ပါတော့မယ်။ Credit
မတရား အသတ်ခံ လိုက်ရတဲ့ ဗန်မော် ( မန်စီခရိုင်) က (၅) လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု